CBD FAQS - Edza Yakadzikama CBD
Bvunza Kure uye kana uine mubvunzo izvo hazvipindurwe pano, inzwa wakasununguka kuti utaure nesu
pa256-302-9824 kana isu email pa service@trytranquil.net.
CBD chinhu chinoitika chega chega chemuti wehemp. Iyo isiri-inodhakisa phytocannabinoid iyo inopa huwandu hwakazara-hwemuviri hunoshandiswa. CBD inongova imwe yezvakawanda zvephytocannabinoids uye mamwe phytochemicals anowanikwa muhemp.
CBD oiri inotorwa kubva kune hemp zvinomera zvine huwandu hwakawanda hwe cannabidiol (CBD) uye yakaderera mamazinga eTHC. Yakadzikama CBD inogadzira mamwe emhando yepamusoro emhando yepamusoro yeCBD yemafuta, yakatorwa kubva kune hutano, CBD-yakafuma hemp zvirimwa zvakasimwa muno muUSA.
Yedu CBD oiri inogadzirwa sei?
Yedu hemp ndeyeKudya Alliance yakasimbiswa, yakakura uye inokohwa kumapurazi edu muAlabama & Kentucky. KuTransquil Farms, isu tinoshandisa cryo ethanol kuburitsa kuti tigadzire zvakazara zvine chando decarboxylated isina kuchena, iyo ichangobva kugadzirwa kuita yakazara-spectrum distillate kuburikidza neinotungamira nzira dzekudzikisa (kureva spd & wfd).
Ndeupi musiyano uripo pakati pembanje nembanje?
Sayenzi, maindasitiri hemp nembanje chirimwa chimwe chete, chine zita uye mhando yezita reCannabis sativa. Ivo vane yakasarudzika genetic chimiro, zvakadaro. Kazhinji, indasitiri hemp yakasimba kwazvo ine mapfunde akasimba akareba uye mashoma maruva. Mbanje michero inowanzo kuve diki, bushier, uye izere nemaruva mabukira. Nekudaro, nyowani nyowani maindasitiri hemp mhando muU.SA dziri kubatwa kuti dzive nemaruva mazhinji uye goho repamusoro re cannabinoids uye terpenes, senge Kentucky hemp yatiri kushandisa izvozvi. Kazhinji yenguva, mbanje ine huwandu hwakawanda hweTC uye huwandu hwakaderera kwazvo hweCBD. Hemp, kune rimwe divi, zvakasikwa ine huwandu hwakakwira hweCBD (mune dzakawanda zviitiko) uye inongoteedzera huwandu hweTC. Neraki, iyo cannabinoid chimiro che hemp chakanakira vanhu vanotsvaga mabhenefiti kubva ku cannabis vasina iyo 'yakakwira.' Nhoroondo, hemp yakashandiswa kugadzira zvigadzirwa zvekudya, faibha, tambo, bepa, zvidhinha, oiri, epurasitiki yepanyama, uye nezvimwe zvakawanda. MuUS, mbanje inowanzo shandiswa zvese mukuvaraidza uye nemushonga. Izwi rekuti "mafuta e cannabis" rinogona kureva mbanje kana mafuta anobva ku hemp, nekuti mbanje ne hemp marudzi maviri akasiyana e cannabis. Ose Mafuta eTrbquil e CBD anotorwa kubva kuhemp.
Ko CBD iri pamutemo here?
CBD kubva hemp inowanikwa zvakanyanya muUSA. Muna 2018, zvinyorwa kuUS Farm Bill zvakanyoreswa zviri pamutemo kutengeswa kwehemp pasi pemimwe mirawo. Zvigadzirwa zvine runyararo zveCBD zvinotorwa kubva kuAmerican-yakura, yakakwira-CBD maindasitiri hemp uye inoteerana T. Isu tinodada tinopa kutumira kwemahara, veterans discounts, uye zvakawanda zvekutengesa zvekutengesa pane zvese zvigadzirwa zvedu.
Ndinofanira kuchengeta sei CBD yangu? Chii chinonzi hupenyu hwesherufu?
kana hupenyu hwakanakisa hwesherufu, chako Chakadzikama chigadzirwa chinofanira kuchengetwa munzvimbo yakaderera mwando, inotonhorera, ine rima kure nezuva rakananga. Izvi zvinobatsira kuchengetedza zvivakwa zvekubuda kwehemp. Kana CBD yakachengetedzwa zvakanaka inogona kunge iine gore rimwe chete pasherufu.
Ini ndichakundikana bvunzo yemishonga kana ndikatora zvigadzirwa zveCDD?
Yakadzikama CBD oiri inotorwa kubva kuUSA-yakasimwa maindasitiri hemp, uye inogona kunge iine trace THC mazinga pazasi pe0.3%. Yakadzikama CBD haivimbise kuti iwe unozopasa kana kupasa sikirini yemushonga mushure mekudya zvigadzirwa zvedu. Izvo zvinokwanisika kuti trace THC zvemukati zvinogona kuratidza pane akasiyana madhizaini kuongororwa.
Ndeipi nzira yakanakisa yekushandisa?
Zvigadzirwa zvine runyararo zveCBDD zviripo mumhando dzakasiyana siyana. Isu tinopa CBD maoiri ari nyore, akachena, uye anoshanda, uye anodyiwa nekuisa madonhwe pazasi perurimi. Isu tinopa roll-pane chigadzirwa, icho chinopa chisina-kusununguka, chishandiso chinoshanda chinoshanda kwazvo pakuenda uye chinokutendera iwe kunongedza chaiko kwaunoda kunanga mabhenefiti anogara-kwenguva refu. Isu tinopawo kirimu yemusoro, inoiswa mafuta, yakapfava, uye inogara kwenguva refu, nepo ichipa huwandu hwerubatsiro rwehutano. Ndokumbira utarise kuburikidza neyedu blog uye akasiyana zvigadzirwa mapeji kuti uone ndechipi chigadzirwa chingave chakanyanya kukodzera iwe uye zvaunoda.
Aiwa. Yedu yese hemp yekubvisa zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kumaindasitiri hemp ne THC mazinga pazasi pe0.3%. Iko hakuna chinodhakisa mhedzisiro kubva kutora zvigadzirwa zvedu.
Ndeipi Tranquil CBD yekutumira mutemo?
Dzimba dzeUnited States Kutumira i $ 7.99 paodha uye ichaendeswa kuburikidza neFedEx uchishandisa 48 awa yekutumira. Yedu yekubata nguva mazuva maviri ebhizinesi. Ndokumbirawo mubvumire mazuva ebhizinesi mana kuti mugamuchire yako Isu hatitumire kuIdaho, Montana, kana South Dakota.
Kutumira kwepasi rose i $ 25.00 paodha. Kununurwa kazhinji kunotora pakati pemazuva manomwe kusvika kumakumi maviri kusvika. Yakavimbiswa mazuva ekuendesa kana nguva haisipo yeInternational Shipping.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti nditore chigadzirwa changu?
Iwe unowanzo gamuchira chigadzirwa chako mukati memazuva matatu kusvika mana ekushanda kwemaDomestic United States odha. Maodhi epasi rese anowanzo kutora mazuva 3-4 asi haigone kuvimbiswa.
Zvese zvekutengesa zvinotengwa kubva kuno saiti ndezvekupedzisira. Kudzoka, kana Refund chikumbiro zvicharambwa.
Nyika dzatinotumira kuUnited States
Nekuda kwemitemo yeUnited States, tinotumira zvigadzirwa zveCDD kumatunhu ese eUS kunze kweIdaho, Wyoming neSouth Dakota. Isu hatitumire kune idzi nyika.